Gerardo Diego. 6 nhetembo nemanyoni ekumurangarira | Zvazvino Zvinyorwa
Gerardo Diego. 6 nhetembo nemanyoni ekurangarira
Gerardo diego ndeimwe ye vadetembi vakuru of the Chizvarwa che27. Santanderino nekuzvarwa, zvakadaro akafa muMadrid zuva rakaita sezuva ra 1987. Ini ndinorangarira basa rake nesarudzo yeaya 6 nhetembo ayo anosanganisira akati wandei emamsoneti uye mamwe mapfupi nziyo.
1 Gerardo diego
2 6 nhetembo
2.2 Kwete kukuona
Akazvarwa muSantander munaGumiguru 3, 1896, akagashira degree rake rezvechiremba mukati Philosophy uye Tsamba paYunivhesiti yeDeusto neMadrid, kwaakasanganawo naJuan Larrea, mudetembi wenyika yake, waakaramba aine hushamwari naye. Zvaive futi Mutauro uye Zvinyorwa mudzidzisi mumaguta akasiyana akadai seGijon neSoria, uye aive zvakare mutariri wevatariri ve Lola naCarmen, magazini maviri ezvinyorwa. Kudzidzisa kwakamuita kuti afambe kwakawanda achipa hurukuro uye makosi. Yakanga iri zvakare munyori uye munyori wemimhanzi.
Basa rake rinosanganisira anenge angangoita mabhuku makumi mana semuenzaniso Kudanana kweMwenga, Ngirozi dzeCompostela, Mwedzi murenje o Kudzungaira kite. Akakunda zvakasiyana siyana prizes s Zvinyorwa Zenyika, iyo yaakawana kaviri, iyo Guta reBarcelona and the Cervantes.
Kuna Juan Ramón Jiménez
Wakanga uri mumvura
Wanga uri kuti ndakakuona
Maguta asina kupfeka
kurira semhuka dziri mupaki
mazwi acho aive manenji
senge idzi dzandinokupa zvino
Vakafunga kuti vaive newe
nekuti ivo vaiziva kutaipa pane fan yako
Rimwe zuva uye rimwe zuva uye rimwe zuva.
Kugona kukuona, kuziva kuti uri padhuze,
kuti chishamiso cherombo chingangoitika.
Uye moyo uye kuverenga nekambasi,
kukundikana zvese zvitatu. Hapana anokufungidzira.
Chitatu, China, Chishanu, ndisina kukuwana,
kwete kufema, kusave, kwete kukodzera iwe.
Anoda kwazvo, anokuda
uye kuzvarwa patsva kukuda.
Ehe, kuzvarwa mazuva ese. Zvese zvinhu zvitsva.
Nyowani ndiwe, hupenyu hwangu, iwe, kufa kwangu.
Kutsvangadzira (uye anga ari masikati)
nekutya kusingaperi kwekukuputsa iwe.
Inzwa izwi rako, hwema hwema hwako, zviroto,
o, mirages inodzoserwa murenje.
Kufunga kuti unonditiza, unoda ini,
unoda kuzviwana mandiri, uzvirasire.
Zvikepe zviviri mugungwa, zvinopofumadza maseiri.
Meso avo achange achitsvoda mangwana here?
Ndiani akati vanopera mukombero wendarama chishuwo
kurira kuri pamutemo kwemwedzi pamabhura
uye kukumbira kwakakwana kweiyo elytra
yeiyo cinema paanoshandisa yake nyoro protectorate?
Tsvaga muhomwe yangu
Iwe unowana mariri minhenga nekuda kweshiri
mafufu achitsvaga chingwa chakadyiwa nezvipfukuto
mazwi erudo rusingaperi asina
uye nzira yakavanda yemafungu.
Kuchave nerunyararo rwegirini
ese akagadzirwa nemagitare asina kuvhurwa
nemhepo panzvimbo pemvura.
Giralda mune yakachena prism yeSeville,
yakaenzaniswa nemutobvu nenyeredzi,
chakuvhuvhu mukugadzika kwebhuruu, shongwe isina kubanda,
yemichindwe isina zvivakwa.
Kana girazi rako mhepo iri mberi ichipenya,
usafungisisa iwe -ay, Narcisa-, maari,
kuti ganda rako remusikana harichinje,
Orenji rose kuzuva rinokunyaradza.
Muchiedza chemuti wemonimu,
yako kumucheto ndiyo bevel, barbera blade
iyo yakanakisa kumira kwayo kunonatsa.
Kubata kunotsvedza caress yayo isina maturo.
Mudejar ndinokuda kwete muKristu.
Vhoriyamu hapana chimwezve: hwaro uye kukwirira.
Kuna Blas Taracena
Yakanga iri muNumantia, ichiderera
masikati aAugust Nyamavhuvhu uye anononoka,
Numantia yekunyarara nekuparadza,
mweya werusununguko, chigaro chemhepo.
Chiedza chakava changu dzimwe nguva
yekujeka uye kupera,
kujekesa kwekusavapo kwemanheru,
tariro, tariro yechishamiso.
Shiri isina mbira,
isina bazi, isina lectern, inoimba, rave,
inoyerera panhongonya yefivha yake yakaoma.
Ini ndinorarama kurova kwaMwari kwakatidonhedza,
kuseka uye kutaura kwaMwari, wakasununguka uye wakashama.
Uye shiri, ichizviziva, yakaimba.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Type » Nhetembo » Gerardo Diego. 6 nhetembo nemanyoni ekurangarira
Kudzokorora kweChikara Chinouya Kuzondiona
Nhetembo dzaAntonio Machado